Daawwannaa MM Abiy Awurooppaa maal irratti fuulleffate? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Ministirri Muummee gita isaanii kan Xaaliyaanii Guseeppee Kontee waliin
Ministirri Muummee Abiy Ahimad daawwannaadhaafi yaa'ii idil-addunyaa irratti hirmaachuuf Awurooppaa jiru. Daawwannaa isaanii isa jalqabaan Xaaliyaanitti kan ture yommuu ta'u biyyattii waliinis waliigalteewwan adda addaa qajeelfataniiru.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad daawwannaa Awurooppaatti taasisaniin kora dinagdee kan Idil-Adunyaa irratti hirmaachuuf Siwiizerlaand, Daavisillee galaniiru.
Ministirri Muummee daawwannaa isaanii hanga ammaatti taasisaniin Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Daariktera Ol-aanaa Jaarmiyaa Nyaata Addunyaa kan ta'an Daaviid Beeziil waliin walarganii haasa'aniiru.
Daawwannaa isaanii guyyaa lamaffaatiin ammoo Ministirri Muummee Abiy Ahimad Pirezedaantii Fandii Misooma Qonnaa Addunyaa kan ta'an Giilbert Howungiboo waliin marii taasisaniiru.
Turtii isaanii Pirezedaanticha waliin taasisaniin sochiiwwan dhimmoota misooma jallisiifi wabii midhaan nyaataa irratti gargaarsi akka barbaachisu himanii misooma jallisaa sadarkaa giddu galeessaa baballisuudhaaf maallaqni uummata baadiyaadhaaf bifa ittiin dhiyeessuun danda'amu irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii waajirri isaanii beeksiseera.
Pirezidaantiin Faransaay Saa'udiitti daawwannaa tasaa taasisan
Kana malees Ministirri Muummee Xaaliyaanitti ministeera muummee Guseeppee Kontee, pirezedaantii Seriyeegoo Matareelaan, biyyattiifi kantiibaa magaalaa Room, Phaaphaasii Kaatolikii warra Roomaa waliinis walarganii mariyataniiru.
Daawwannaa isaanii Xaaliyaanitti taasisaniin booda kaleessa galgala Ministira Muummee Guseeppee Kontee waliin ibsa kennaniiru.
Ibsa gaazexaa kenname irratti maaltu jedhame?
Ministirri Muummee Abiy daandii baaburaatiin Mitsuwwaafi Finfinnee walqunnamsiisuudhaaf ministirri muummee Xaaliyaan Guseeppee Kontee fedhii akka qaban mullisaniiru.
Itti dabaluudhaan Ministirri muummee Abiy akka jedhanitti ijaarsi daandii baaburaa kun kan baasu akka ta'e qorachuudhaaf baasii barbaachisu akka kennanillee qophii ta'uu isaanii heeraniiru.
Ministirri Muummee Xaaliyaan Guseeppee Kontee gama isaaniitiin ji'oota muraasa dura Itoophiyaa dabalatee biyyoota Gaanfa afrikaa keessatti daawwannaa akka taasisan yaadatanii, daawwannaan taasisan ture kun biyyi isaanii akka Gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffannaa taasistuuf gargaareera jedhan.
Hariiroo Itoophiyaa, ertiraafi Somaaliyaa gidduu jiru cimsuuf kan dhaabbataan deggeramu taasisuu keessatti Xaaliyaan adda durummaadhaan hirmaattuu akka ni hawwina jedhan.
Ibsa kennan irratti dhimi Ministirri Muummee Abiy kaasan keessaa tokko Embaasiiwwan Finfinnee keessatti lafa bal'aa qabatanii jiran gariidhaan banaa taasisuudhaan uummataaf bakka bashannanaa taasisuun akka tajaajila kennan fedha isaanii akka ta'es dubbataniiru.
Viidiyoo Muummichi Ministiraa Dr Abiy daawwannaa Ambootti taasisan keessaa taateewwan muraasa